ज्ञानेन्द्र शाहीका बारेमा खुल्यो यस्तो रहस्यमय खुलाशा! अब ज्ञानेन्द्र शाहीको भविष्य के होला (भिडियो हेर्नुस्) – List Khabar
Home / समाचार / ज्ञानेन्द्र शाहीका बारेमा खुल्यो यस्तो रहस्यमय खुलाशा! अब ज्ञानेन्द्र शाहीको भविष्य के होला (भिडियो हेर्नुस्)
admin June 16, 2021 समाचार Leaveacomment 61 Views
एजेन्सी । हिजोआज सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटर र टिकटकमा ज्ञानेन्द्र शाहीको समूहमाथि कु’टपि’ट भएको भिडियो भाइरल छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर १३ करे खोलामा शाहीसहित उनको समूहमाथि शुक्रबार बेलुकी करिब ११ बजेतिर कु’टपि’ट भएको थियो। शाहीका समूहका केही व्यक्तिको टाउकोमा चो’ट लागेको छ ।
महामारी रोक्न गरिएको लकडाउनका कारण समस्यामा परेकाहरुलाई सहयोग गर्न भन्दै सुर्खेत पुगेका ज्ञानेन्द्र शाही र उनको समुह माथि शुक्रबार ह म ला भएको छ । उनले आफुहरु माथि मध्यरातमा ह म ला गरिएको बताएका छन् । घटनामा शाहीका एक जना सहयोगी घाइते भएका छन् । शाहीले उनलाई घाइते अवस्थामा गाडीवाट वाहिर निकालेको भिडियो सार्वज्निक गरेका छन् । उनले फेसवुक मार्फत भिडियो सहित घटना सार्वजनिक गरेका छन् ।
शाही लेख्छन्, आफनो ज्या नको नै माया मा’री को भिड बाट लाखौ नागरिक बचाउन लागिरहँदा पनि आफनो ज्यान बचाउन सकिएन, सतिले सरापेको देश हो भन्थे हो रहेछ अब त यो देशमा नै बस्न मन लागेन । मध्यराती सुर्खेतमा हामी माथी ज्यान मा र्ने ह’म ला भो, म ज्ञानेन्द्र शाही,राजेश महत,कृष्ण पान्डे,तिलक बस्नेत, नितु खडका,लोक बहादुर रोकाय,शान्त शर्मा, सीता आचार्य, महेश बि सि,खगेन्द्र बजगाई को ज्या न बाल बाल बच्यो धन्यवाद भगवान धन्यवाद शुभचिन्तक ।
यो अर्को समाचारः चिकित्सा शिक्षालाई कमाउ ध न्दा बनाए लेखक एवं नागरिक अभियन्ता खगेन्द्र संग्रौलाले चिकित्सा शिक्षालाई कमाउ ध न्दा बनाएर जनस्वास्थ्यमा भइरहेको खेलबाडको विरोध गर्दा आफूसमेत १८ जना ६ घण्टा थु निनु परेको बताएका छन्। शुक्रबार बालुवाटारबाट समातिएका संग्रौलाले हिरासतमुक्त भएपछि शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो ज्या दती सबैलाई मुख खोल्न अपिल गरेका हुन्।
‘चिकित्सा शिक्षालाई कमाउ ध न्दा बनाएर जनस्वास्थउपर खेलबाड गर्ने मार्सी भात ख्वाउने र खाने आवाज उठाउँदा ओलीतन्त्रले हामी १८ जनालाई ६ घण्टा थु न्यो,’ संग्रौलाले लेखेका छन्, ‘सकल मान्यवर, मुख खोलौं, विरोध बोलौं, यी मक्खीचुस मार्सीमार्गीहरूलाई सम्बन्धनको आ परा धिक कारोबार गर्न नदिऔं।’
दुर्गा प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा गैरकानुनी रूपमा सम्बन्धन दिन लागेको भन्दै ‘बृहत् नागरिक आन्दोलन’अन्तर्गत शुक्रबार विरोधमा उत्रिँदा संग्रौला, नारायण वाग्ले, युग पाठक, अर्चना थापा, रिता परियारलगायत १८ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
Previous मृ’गौलामा पत्थरी हुँदा खाँदै नखानुहो’स् यी खानेकुरा, खाएमा हुनसक्छ मृ’र्गौला ड्या’मेज
Next आज धनको वर्षा हुने यी ५ राशिको भाग्य हेर्नुहोस्